ငွေကြေးစနစ်စွမ်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
သင်တစ်ဦးငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုကြည့်ပါအခါတိုင်း, ထိုသို့သော EUR အဖြစ်ငွေကြေးတစ်စုံဆိုင်ပါလိမ့်မယ် /အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ အီးယူအာရ်/အမေရိကန်ဒေါ်လာ ယူရိုငွေကြေးနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေး: နှစ်ဦးငွေကြေးဖော်ပြသည်။
ဤတွင် Metatrader ၏စျေးကွက်လက်ပတ်နာရီ window တွင်ပြသငွေကြေးကိုစွမ်းတဲ့မျက်နှာပြင်ပုံသည်:
base ငွေကြေးထိုအ Quote ငွေကြေးစနစ်
ငွေကြေးတစ်စုံ၏ပထမဦးဆုံးငွေကြေးက "စခန်းငွေကြေး", ဒုတိယတစျခုမှာ "ကိုးကားငွေကြေး" ဟုခေါ်၏, သူတို့မကြာခဏရှေ့သို့မျဉ်းစောင်း ( "/") ကကွဲကွာနေစဉ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
အီးယူအာရ် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR / GBP, EUR / CHF, EUR / JPY, EUR / CAD
GBP GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, GBP / CHF, GBP / JPY, GBP / CAD
အမေရိကန်ဒေါ်လာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF
အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးတန်ဖိုးကိုအစဉ်အမြဲစသည်တို့ကိုဥပမာ 1, 1 ဒေါ်လာ, 1 ပေါင်, 1 ယူရိုဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါတွက်ချက်မှုသည်: ၏ 1 ယူနစ် base ငွေကြေးစနစ် အဆိုပါ Quote ငွေကြေးစနစ်၏ X ကိုယူနစ်ကိုဝယ်မည်။
ခြေရင်းငွေကြေးထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY အဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ, ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကို USD / JPY 88.48 တစ်ကိုးကားတစ်ဦးကိုအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာဂျပန်ယန်း 88.48 ညီမျှကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ ခြေရင်းငွေကြေးထိုကဲ့သို့သော EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ် EUR ဖြစ်ပါသည်လျှင်, 1.3980 တစ်ကိုးကားတဦးတည်းယူရို 1.3980 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။
A ကုန်သည် သူသည်အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးကိုးကားငွေကြေးကိုမှဆွေမျိုးမြင့်တက်, ဒါမှမဟုတ်သူကခြေရင်းငွေကြေးကိုးကားငွေကြေးကိုမှဆွေမျိုးလျော့ကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်ဆိုပါကတစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံရောင်းပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်သည်ဆိုပါကတစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံကိုဝယ်မည်။
ဥပမာ၊ ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကြည့်ကြစို့၊ ယူရိုသည်အခြေခံငွေကြေးဖြစ်ပြီးဝယ်ရန် / ရောင်းရန်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ယူရိုဇုန်၏အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာကြွေးမြီအကျပ်အတည်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ယူရိုကိုအနိုင်ယူလိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကယူရိုငွေကိုရောင်းလိမ့်မည်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ သငျသညျကိုသူတို့ကအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာဆန့်ကျင်တန်ဖိုးကျကြလိမ့်မည်ဟုမြော်လင့်ခြင်းနှင့်အတူယူရိုရောင်းရတယ်။
မှတ်ချက်: Forex ကုန်သွယ်ထိုစုံတွဲအတွင်းအချင်းချင်းငွေကြေးနှင့်အရောင်းရဆုံး၏တစ်ပြိုင်နက်ဝယ်ပါဝငျသညျ။ သင်တစ်ဦးငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်ကြသောအခါထိုအကြောင်းကြောင့်, သင်တို့ခြေရင်းငွေကြေးကိုမဝယ်နဲ့ကိုးကားငွေကြေးကိုရောင်းချ။
များသောအားဖြင့်ငွေကြေးအတွဲများကို“ လေလံ” နှင့်“ တောင်းသော” ဈေးနှုန်းဖြင့်သာရောင်းဝယ်ကြသည်။
အဆိုပါ "လေလံ" သငျသညျကိုးကားငွေကြေးကိုမဝယ် / အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးရောင်းနိုင်သည့်မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ "မေးပါ" သင်အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေး / ရောင်းကိုးကားငွေကြေးကိုမဝယ်နိုင်သည့်မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်ကမမေးစျေးနှုန်းအမြဲတမ်းလေလံစျေးနှုန်းထက်မြင့်မားကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။
ပျံ့နှံ့ အဆိုပါလေလံနှင့်မေးဖို့စျေးနှုန်းခြားနားချက် (Spread = မေးပါ-Bid).
အောင်မြင်သောကုန်သွယ်ဖို့ key ကိုသင်တစ်ဦးအစပြုသူအဖြစ်ကုန်သွယ်မှုရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းငွေကြေး၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစွမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်တည်ရှိသည်။ သငျသညျယုံကြည်မှုရဖို့အဖြစ်, သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်အစုစုအတွက်ပိုပြီးအားလုံးအတွက်ထည့်သွင်းဖို့လိုပေမည်။ သို့သော်အသစ်တခုအဘို့ ကုန်သည် သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကအမြဲဖွင့်ရိုးရှင်းသေချာစေရန်အားလုံးတစ်ကန့်သတ်အရေအတွက်သည်နှင့်အတူကုန်သွယ်ရန်အကြံပြုထားသည်။
ရှစ်အများဆုံးမကြာခဏကုန်သွယ်ငွေကြေး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR, JPY, ပေါင်, CHF, CAD, NZD နှင့် AUD) ကိုအဓိကငွေကြေးဟုခေါ်ကြသည်, သူတို့တစ်အခန်းကဏ္ဍလျော့နည်းကစားလျော့နည်းအရည်ကြောင့်ရှိသမျှသည်အခြားသောငွေကြေးအဖြစ်အသေးစားရည်ညွှန်းကြသည်။
အဆိုပါဗိုလ်မှူး Pairs ရိုးရှင်းစွာအတူတွဲခုနစ်လုံးကိုအဓိကငွေကြေးများမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ Forex အရောင်းအကျော် 70% များအတွက်အကောင့်:
EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 28% ယူရိုဇုန် /
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ယူရိုဒေါ်လာ တူညီတဲ့
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY 17% ယူနိုက်တက်စတိတ် /
ဂျပန် ဒေါ်လာစျေး-ယန်း တူညီတဲ့
GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 14% ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း/
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Sterling-ဒေါ်လာစျေး Sterling
သို့မဟုတ် Cable ကို
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF 9% ယူနိုက်တက်စတိတ် /
ဆွစ်ဇလန် ဒေါ်လာစျေး-ဆွစ် Swissy
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD 5% ယူနိုက်တက်စတိတ် /
ကေနဒါ ဒေါ်လာစျေး-ကနေဒါ Loonie
AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 4% သြစတြေးလျ /
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သြစတြေးလျဒေါ်လာ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြသို့မဟုတ်
NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 4% နယူးဇီလန်/
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ ကီဝီ
ငွေကြေးအမည်များနှင့် NICKNAME အပေါ်မှတ်ချက်:
ငွေကြေးအမည်များနှင့်အမည်ဝှက်ကိုသင် Forex ဈေးကွက်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကိုနားထောင်သို့မဟုတ် Forex စျေးကွက်သုတေသနလုပ်နေကြသည့်အခါရှုပ်ထွေးဖြစ်, ဒါကြောင့်စာရေးဆရာသို့မဟုတ်လေ့လာဆန်းစစ်တစ်ဦးချင်းစီငွေကြေးသို့မဟုတ်ငွေကြေးတစ်စုံကိုရည်ညွှန်းလျှင်ခွဲခြားဖို့သေချာပါစေနိုင်ပါတယ်။
နာမည်ပြောင်အသုံးပြုမှုအတွက် Difference ကိုထောကျလှမျးအပေါ်အရိပ်အမြွက်:
အဓိကဘဏ်မှာလေ့လာဆန်းစစ်ကနေဒါဒေါ်လာအနာဂတ်၌ခိုင်ခံ့စေမည်ကြောင်းအကြံပြုအစီရင်ခံစာရေးသားခဲ့သည်လျှင်, မှတ်ချက် / သောအမေရိကန်ဒေါ်လာအကြံပြုခြင်း, ဤကိစ္စတွင်၎င်း CAD ထဲမှာ, တစ်ဦးချင်းငွေကြေးရည်ညွှန်းCAD (အနိမ့်ရွှေ့မည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဆီးအတားမရှိ / CAD ) အားကောင်း။ သို့သော်မှတ်ချက်အဆိုပါ Dollar- ကြောင်းအကြံပြုလိုလျှင်ကေနဒါ Loonie အနာဂတ်၌ခိုင်ခံ့စေမည်သို့မဟုတ်ပါက / ငွေကြေးတစ်စုံကိုရည်ညွှန်းပြီးခန့်မှန်းကြောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာမှပမာဏသည်ဖြစ်ပါတယ်CAD (ပိုမိုမြင့်မားရွှေ့မည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခွန်အားကြီး / CAD ) ဆီးအတားမရှိ။
အဘယ်ကြောင့်ဤရွေ့ကားယင်းခုနစ်ပါးဗိုလ်မှူး Pairs ပါသလား?
ဒါဟာအားလုံးအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဤအများဆုံးတက်ကြွစွာလောကရှိ (ကုန်သွယ်) ငွေကြေးပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့ paring သိသာနှင့်ကုန်သွယ် volumes ကိုနေ့တိုင်းဒေါ်လာ၏ထရီလီယံမှစုစုပေါင်း။ ဤရွေ့ကားယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်သွယ်ဘို့, အထူးသဖြင့်အစပြုသူကုန်သည်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအားလုံးဖြစ်ကြသည်။ အများအပြားအကြောင်းရင်းများသည်ဤစွမ်းအပေါ်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအောက်ပိုင်းန့်နှင့်အတူစတင်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါပိုပြီးအရည်ငွေကြေးတစ်စုံအောက်ပြန့်ပွားပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန့်ပွားကဘာလဲ? ပြန့်ပွားအခြေခံအားဖြင့် '' လေလံ '' ၏ခြားနားချက်ဖြစ်ပြီးဒီ brokerage သူတို့ရဲ့ကော်မရှင်ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီး, စျေးနှုန်း, သို့မဟုတ်အခြားစကား '' မေးပါ '' ။ အဓိကတစ်စုံအပေါ်တစ်ဦးကပုံမှန်ပျံ့နှံ့တစ် PIP သုံးယောက် pips (တခါတရံအထက်သို့လေး pips ၏သော်လည်း) အကြားဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်၏သမ္မာသတိမှာဖြစ်ပါတယ် ပှဲစား ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အဓိကအား, ဒါပေမယ့်, ထိုစုံတွဲ၏ငွေဖြစ်လွယ်နှင့်အတူအလွန်နီးနီးကပ်ကပ်လည်းပြောပြတယ်။
ဤရွေ့ကားခုနစျပါးကိုအဓိကအားလုံးအတွက်အမြဲတမ်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောများအတွက် Starting Point သို့ဖြစ်သင့် ကုန်သည် ကိုယ့်အကောင်းတစ်ဦး Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်သင်ယူခြင်း။ ဤရွေ့ကားအားလုံးကုန်သွယ်မှုနေရာချထားမှုကိုအဘို့အခွင့်အလမ်းအများဆုံး (ကုန်သွယ်ရေး Setup) ပေးပြီး Forex နေ့ကကုန်သွယ်များအတွက်စံပြများမှာပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာ Forex ကုန်သွယ်စနစ်များကိုသူတို့ကဤအားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအကြံပြု, ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ပြည့်သည်ဤခုနစ်ပါးသောအဓိကအားလုံးအတွက်လုံလောက်အောင်အခွင့်အလမ်းများထက်ပိုရှိပါတယ် ကုန်သည်.
သင်ရုံသုံးခုအဓိကငွေကြေးအားလုံးလေးယောက်မှကျွမ်းကျင်လျှင်, သင်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးအောင်နိုငျသညျ။ အဆိုပါငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု 90% ကသူတို့ကိုပါဝင်အဖြစ် Forex ဈေးကွက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်အများစုမှာဤအဓိကအားလုံးပိုင်ဆိုင်။ ဒါကြောင့်အများစုနှင့်အတူနေထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက Forex စုံတွဲသည်ကွဲပြားသောအဖြစ်အပျက်များကိုတုန့်ပြန်ပြီးထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်နည်းဗျူဟာလိုအပ်သည်။ ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ငွေကြေးအထူးအခြေခံများဟုခေါ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အပိုင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ ယူပါ။
ငွေကြေးအားလုံးအပေါ်တချို့ကစာရေးဆရာများဗိုလ်ကြီး (EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY, GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF) အဖြစ်သာပထမလေးငွေကြေးကိုအားလုံးအတွက်အုပ်စုဖွဲ့ပြီ မှုသိသိသာသာလျော့နည်းကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်ကို (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD, AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အသေးစား pair တစုံဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးဖို့နောက်ဆုံးသုံး relegating ။
သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကုန်စည်-based အရင်းအမြစ်များကိုတင်ပို့န်းကျင် revolve သောကွောငျ့ဤနောက်ဆုံးသုံးငွေကြေးအားလုံးမှာလည်းကုန်စည်အားလုံးကိုခေါ်ခံရ၏ဂုဏ်ထူးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။
AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ: သြစတေး (သြစတြေးလျ) ဒေါ်လာ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD: ဒေါ်လာစျေး ကေနဒါ သို့မဟုတ် Loonie
NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ: Kiwi (နယူးဇီလန်) ဒေါ်လာစျေး
အသေးအဖွဲစွမ်းကိုခေါ်ခံရရာအရပ်အနိုင်ရသောအခြားစွမ်းစကင်ဒီနေးငွေကြေး (ဒေါ်လာ / NOK, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / DKK, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / SEK) ဖြစ်ကြသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / NOK: နော်ဝေခရိုဏာ (နော်ဝေး)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / DKK ဒိန်းမတ်ခရုန်း (ဒိန်းမတ်)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / SEK ဆွီဒင်ခရိုနာ (ဆွီဒင်)
စကင်ဒီနေးငွေကြေးနော်ဝေအသားတင်ပို့ကုန်ရေနံမောင်းထုတ်သောခိုင်ခံ့သောစီးပွားရေးကို (စကားမစပ် NOK တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စေသည်ဖြစ်သောရှိပါတယ်ကြောင့်ဇယား (အားနည်းနေဒေါ်လာ / strong ခရိုဏာ) တွင်လမ်းဆင်းဖြစ်သောအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / NOK, နောက်ဆုံးသောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအလွန်အားကောင်းတဲ့ပါပြီ ကုန်စည်ငွေကြေး) ။
တစ်ဦးက Cross-ငွေကြေးတစ်စုံ, သို့မဟုတ်အတိုကောက်လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့မဟုတ်လက်ဝါးကပ်တိုင်, အမေရိကန်ဒေါ်လာများမပါဝင်ပါသည်ဟုမဆိုငွေကြေးတစ်စုံဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် # 1: အမျိုးမျိုး
အကြောင်းပြချက် # 2: ငွေကြေး Targeting
အဆိုပါလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုပိုပြီးတိုက်ရိုက်သတင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များ၏အားသာချက်ယူတိကျတဲ့တစ်ဦးချင်းငွေကြေး၏အရောင်းအပစ်မှတ်ထားမှကုန်သည်များကို enable ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏သုတေသနယူရိုအချုပ်အခြာအာဏာကြွေးမြီကိစ္စများ (ဂရိ, အိုင်ယာလန်နဲ့ပေါ်တူဂီ) ကြောင့်အကြီးအကျယ်ပြဿနာတွေရှိပြီးပါကဆီးအတားမရှိဖြစ်လာလတ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ သင်ဤ၏အားသာချက်ယူန်းကျင်ကိုကြည့်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ကတည်းကပိုင်းတွင် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းစဉ်းစားပါ, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုချွတ်အများကြီးပိုကောင်းမပေးကြောင်းကောက်ချက်ချစေခြင်းငှါ, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကြီးအကျယ်ကြွေးမြီကိစ္စများရှိပါသည်။ သင့်ရဲ့နောက်ထပ်သုတေသနကွောငျးဖျောပွသ ဆွစ်ဇလန် တစ်ဦးသိပ်အားကောင်းစီးပွားရေးနှင့်လျော့နည်းကြွေးမြီရှိပါတယ်, ဒါသငျသညျ EUR / CHF shorting အားဖြင့်ဒီအားသာချက်ယူရန်ဆုံးဖြတ်။
EUR / CHF 3.4 ယူရိုဇုန် /
EUR / GBP 2.5 ယူရိုဇုန် /
EUR / CAD 4.4 ယူရိုဇုန် /
EUR / AUD 3.8 ယူရိုဇုန် /
EUR / NZD 7.7 ယူရိုဇုန် /
EUR / JPY 3.1 ယူရိုဇုန် /
GBP / JPY 4.7 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း/
CHF / JPY 4.0 ဆွစ်ဇာလန် /
AUD / JPY 3.1 သြစတြေးလျ /
NZD / JPY 3.9 နယူးဇီလန်/
CAD / JPY 3.9 ကနေဒါ /
GBP / CHF 5.2 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း/
GBP / CAD 6.0 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း/
GBP / AUD 4.4 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း/
GBP / NZD 9.2 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း/
AUD / CHF 4.1 သြစတြေးလျ /
AUD / CAD 4.4 သြစတြေးလျ /
AUD / NZD 5.1 သြစတြေးလျ /
CAD / CHF 4.0 ကနေဒါ /
* ဤ“ ပုံမှန်ပျံ့နှံ့မှုများ” သည် http://www.fxcm.com/forex-spreads.jsp မှရယူပြီး FXCM အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီးဇွန်လ 1၊ 2011၊ ဇွန် 30၊ 2011 အတွက်ပျမ်းမျှပျမ်းမျှပျံ့နှံ့မှုမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ။ ပွဲစားတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပုံမှန်ပျံ့နှံ့မှုသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးငွေကြေးဇယားများပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသည့်ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့မှုညွှန်းကိန်း (StatMonitor_1.1Phat သို့မဟုတ် FXRM ပြန့်ပွားမှုသမိုင်းကဲ့သို့) ကို အသုံးပြု၍ ပျမ်းမျှပျံ့နှံ့မှုကိုကြံစည်ခြင်းကဲ့သို့တိကျမည်မဟုတ်ပါ။
အားနည်းချက် # 1: အမြင့် Spread
အပေါ်ကလက်ဝါးကပ်တိုင်တချို့ကမြင့်မားသောပြန့်ပွားရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, EURNZD 7.5 pips ၏ပုံမှန်ပျံ့နှံ့ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဗိုလ်ကြီးနှင့်အတူမြင်ကြပြီနိမ့်ပျံ့နှံ့နဲ့မြင့်မားတဲ့ပြန့်ပွားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောစွမ်းသည်၎င်း၏နိမ့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုကြောင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့ (နည်းပါးလာကုန်သည်များကြောင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်) ရှိသည်။
အားနည်းချက် # 2: Less နည်းပညာ
ထိုလက်ဝါးကပ်တိုင်အဖြစ်အကြီးအကျယ်အများစုအဖြစ်ကုန်သွယ်ကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်, သူတို့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ ဤနည်းဥပဒေမှခြွင်းချက် EUR / JPY အမည်နှင့် GBP / JPY သော်လည်း, တောင်သူတို့ EUR ထက်ပိုမတည်ငြိမ်သောနှင့်အပြောင်းအလဲမြန်ဖြစ်ကြသည် /အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့် GBP /အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
လုံးဝနီးပါးအားလုံးပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်မှလာသောဒါခေါ်ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေးများ၏ဆန့်ကျင်တန်ပြန်ငွေကြေးအဖြစ်ကိုးကားနေကြပါတယ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ XXX ကိုအသည်အဘယ်မှာရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာ / XXX က: ဤကဲ့သို့သော ISO ကို ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေး (ဥပမာ, ကို USD / MXN) အတွက် 4217 code ကို။ ၏အဖြေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်း ISO ကို အသုံးအများဆုံးထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေး၏ codes တွေကိုနှင့်အမည်များကိုအက္ခရာစဉ်ထဲမှာအောက်ပါအတိုင်းနှင့်ပထဝီတည်နေရာအလိုက်ခွဲခြား။
မှတ်စု: ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာဆန့်ကျင်တန်ပြန်ငွေကြေးအဖြစ်ကိုးကားသည်မဟုတ်ရင်တောင်ချွင်းချက် (ဥပမာ CZK / JPY) အမြဲရှိပါတယ်သော်လည်းနေဆဲမကြာခဏအဓိကငွေကြေး (ဥပမာ, EUR / MXN) ပြီးနောက်ဒုတိယစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် # 1: sexy
အချို့သောကုန်သည်များကသူတို့၏နိုင်ငံခြားလိင်အယူခံဝင်မှုကြောင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောအရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းကိုခံရသည်။ သင်သည်မိမိကိုယ်ကို“ လောကဆန်သောသူ” တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သင်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေပေလိမ့်မည် ပှဲစား သင်လိုအပ်လိမ့်မယ်စဉ်းစား 100 ငွေကြေးစွမ်းကျော်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းပြချက်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်မသိပါကသင့်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။
အကြောင်းပြချက် # 2: နိုင်ငံသီးခြားစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့တိုင်းပြည်များ၏စီးပွားရေးအခြေအနေအားသာချက်ယူကုန်သည်များကို enable ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ပြီးသားအများဆုံး G7 နိုင်ငံများ၏စီးပွားရေးပြဿနာတွေနဲ့ကြွေးမြီနှင့်အတူတင်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်တယ်, သင်အရှိဆုံးဘဏ္ဍာရေးနှစ်အသံသည် (ဥပမာရှည်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတွေ၏ငွေကြေးသို့မျိုးစုံချင် ချီလီပီဆို အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CLP နှင့်ရှည်လျားသောအဆိုပါရောင်းချ စင်္ကာပူဒေါ်လာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ / စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်) ရောင်းသည်။ သို့မဟုတ်သင်သိကြနိုင်ငံတွေ၏ငွေကြေးနက်ရှိုင်းသောဒုက္ခ၌ရှိကြ၏တိုတောင်းဖို့လိုလားသူတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်, သင်အာရပ်ကမ္ဘာအတွက်တင်းမာမှုများစောင့်ကြည့်ခြင်း, တိုတောင်းရန်အီဂျစ်ပေါင် (EGP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ချို့တဲ့စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ် လစ်ဗျား Dinar.
အကြောင်းပြချက် # 3: စီးပွားရေး
သူတို့ရန်ရှိသည်ကြောင့်ဤငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အများစုမှာကုမ္ပဏီများဒါလုပ်နေတယ်။ ကနေစက်ယန္တရားဝယ်ဖို့လိုအပ်နေတစ်ဦးဟနျဂရေီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့် ဂျပန် (HUF / JPY) ။
(ဥပမာ, EGP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pound
LYD လစ်ဗျား Dinar http://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_dinar
MAD အဘိဓါန် Moroccan Dirham http://en.wikipedia.org/wiki/Moroccan_dirham
XAF ဗဟိုအာဖရိကဖရန့် http://en.wikipedia.org/wiki/Central_African_CFA_franc
XOF အနောက်အာဖရိကဖရန့် http://en.wikipedia.org/wiki/West_African_CFA_franc
Zar တောင်အာဖရိက Rand http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_rand
အားလုံး အဘိဓါန် Albanian Lek http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_lek
BGN ဘူဂေးရီးယား Lev http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_lev
CZK ခကျြခကျြ Koruna http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_koruna
HUF ဟနျဂရေီ Forint http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_forint
PLN ပိုလနျ Zloty http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Zloty
HKD ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_dollar
IDR အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_rupiah
INR အိန္ဒိယရူပီး http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_rupee
ဝမ် ကိုရီးယား Won http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_won
MYR မလေးရှားရင်းဂစ် http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_ringgit
PHP ကို ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_peso
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် စင်္ကာပူဒေါ်လာ http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_dollar
THB ထိုင်းဘတ်ငွေ http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_baht
TWD နယူးထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ http://en.wikipedia.org/wiki/New_Taiwan_dollar
VND ဗီယက်နမ်ဒေါင် http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Dong
ARS အာဂျင်တီးနားပီဆို http://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_peso
BRL ဘရာဇီးရီးရဲလ် http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_real
CLP ချီလီပီဆို http://en.wikipedia.org/wiki/Chilean_peso
COU ကိုလံဘီယာရီးရဲလ် http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_real
စီအာစီ ကိုစ်တာရီကန် Colon http://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rican_Colon
MXN မက္ကဆီကန်ပီဆို http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_peso
Bhd ဘာရိန်း Dinar http://en.wikipedia.org/wiki/Bahraini_dinar
ILS အစ္စရေးနယူးအကျပ် http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_new_
IQD အီရတ် Dinar http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_dinar
IRR အီရန် Rial http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_rial
KWD ကူဝိတ် Dinar http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwaiti_dinar
OMR ကလည်းအိုမန် Rial http://en.wikipedia.org/wiki/Omani_rial
QAR ကာတာနိုင်ငံ Riyal http://en.wikipedia.org/wiki/Qatari_riyal
SAR ဆော်ဒီအာရေဗျ Riyal http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_riyal
စမ်းကြည့်ပါ တူရကီလိုင်ရာ http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_lira
ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေးအားလုံးအများစုဟာအလွန်မြင့်ပျံ့နှံ့ရှိသည်။ သငျသညျ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တူတရံ2pips အကြောင်းကိုပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်နေစဉ်, သင့်ကိုယ်သင်အအမေရိကန်ဒေါ်လာ / MXN, CZK / JPY အမည်နှင့် AUD / MXN တူသောလျော့နည်းအရည်ဖြစ်ကြောင်းထူးခြားဆန်းပြားစွမ်းရှိ 200 pips တစ်ပြန့်ပွားပေးဆောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ခွင့်ပြု, အသီးအသီး PIP အခြားအရာအားလုံးသာ 1 / 10 မှတွက်ချက်ခြင်းငှါ, သေးပင် 1 / 10 မှာ, PIP ပျံ့နှံ့နေဆဲမြင့်မားသည်။ သငျသညျဆငျးသှားပါရမှ 200 pips အခါကအမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုတစ်ဦးကိုမှန်ကန်စိန်ခေါ်မှုအားမရစေသည်။
အားနည်းချက် # 2: တသမတ်တည်းမကျတဲ့တင်ပို့ချက်တွေထရေးဒင်း
ငွေကြေးအကြီးအကျယ်ကုန်သွယ်ကြသည်မဟုတ်တဲ့အခါသူတို့အပြောင်းအလဲမြန်ရွှေ့ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကအနိမ့်ငွေဖြစ်လွယ်မကြာခဏတစ်ဦးထက်ပိုစျေးကြီးပြန့်ပွားရှိခြင်းမှတပါး, ငွေကြေးတစ်စုံအလွန်ကောင်းစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတုံ့ပြန်ပါဘူး, ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်မှုကြောင့်သူတို့၏မြင့်ပျံ့နှံ့ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်နှင့်နည်းပညာရှာဖွေတွေ့နိုင်စွမ်းရည်၏သက်ဆိုင်ရာမရှိခြင်း, အများဆုံးထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေးအားလုံးကုန်သွယ်မှုမှအမြတ်အစွန်းမရှိကြပေ။